Umaka: inzuzo | Martech Zone
Qinisekisa Isu Lakho Lezindaba Zomphakathi Ngokumelene Nalolu Hlu Lokuhlola Olunamaphuzu ayi-8
ULwesibili, May 2, 2017 UMsombuluko, May 1, 2017 Douglas Karr
Iningi lezinkampani eziza kithi ukuthola usizo lwezokuxhumana zibheka imithombo yezokuxhumana njengesiteshi sokushicilela nesokutholwa, sinciphisa kakhulu amandla abo okukhulisa ukuqwashisa komkhiqizo wabo, igunya labo kanye nokuguqulwa kwabo ku-inthanethi. Kuningi kakhulu kokuxhumana nomphakathi, kufaka phakathi ukulalela amakhasimende akho nabancintisana nabo, ukwandisa inethiwekhi yakho, nokukhulisa igunya abantu nomkhiqizo wakho abanawo ku-inthanethi. Uma uzikhawulela ekushicileleni nje futhi ulindele ukuthengiswa lapha futhi
Ukucaca Kuhlasela Ukukhungatheka Kokuxhumana
Lwesine, Disemba 22, 2016 Lwesine, Disemba 22, 2016 Douglas Karr
Umngani wami omuhle iminyaka eminingi nguSteve Woodruff, ozimemezelayo (futhi onethalente kakhulu) we-Clarity Consultant, oqhubeka nokwabelana ngokuthengisa okungenangqondo phakathi kwamawebhusayithi namaphrofayli ezokuxhumana nabantu. Uhlanganyele nami intandokazi yakhe yesikhathi sonke eminyakeni embalwa eyedlule: Sisungule imodeli entsha yokukhula okusimeme, okuqhutshwa ngabathengi okususelwa ezimisweni zezinhlelo eziyinkimbinkimbi eziguqukayo. Lesi yisisekelo esisha secebo lomhlaba onoguquko olujulile lwesakhiwo:
Ukuqasha: Igama elithi "P"
NgoLwesithathu, July 2, 2014 Douglas Karr
Abathengisi abakhulu bathokozela ukukhuluma nge-Return on Investment. Izolo, ngiye emhlanganweni nenkampani yezezakhiwo ebinezinselelo ezithile ngecebo labo lewebhu. Isiza sabo sezincwajana besingashayeli imikhondo eminingi kakhulu futhi bebesebenzisa imali ethe xaxa ezinhlelweni eziningi zangaphandle ukushayela ukuholela kumngcele wabo wokuthengisa. Inkinga esiyitholile ukuthi bebekhokhela zonke lezo zinkampani ukuze zincintisane nazo
Bhala uhlu lwebhizinisi lakho nge-Bing Business Portal
ULwesithathu, May 4, 2011 Douglas Karr
Njengoba iGoogle ingumnikazi wemakethe yokusesha, sivame ukugxila kuyo kancane. Kodwa-ke, i-Bing ibilokhu ithwebula kancane isabelo semakethe futhi iphume nezinhlelo zokusebenza ezihlukile ezihlukile - kufaka phakathi i-Android ne-iPad. Ezinye zezici zalezo zinhlelo zokusebenza kanye nesiza se-Bing uqobo kube kuhle kakhulu ukuthi sibuke iGoogle iboleka futhi ithuthukise injini yokusesha ngendlela efanayo. Ukwenza imephu kweBing kuhle impela
NgoMsombuluko, Juni 30, 2008 NgoMsombuluko, Novemba 4, 2013 Douglas Karr
Ngabe inkampani yakho izuza kanjani? Ngabe inhloso ngayinye yenkampani yakho ihambelana nokwakha leyo nzuzo? Ngabe imigomo yamaqembu akho abaphathi ihambelana yini nokuxhasa izinjongo zenkampani yakho? Ngabe imigomo yabasebenzi bakho ihambelana nemigomo yabaphathi bakho? Ingabe ukusebenza kwabasebenzi bakho kukalwa ngokuqhathaniswa nezinhloso zabo? Ngabe isinxephezelo sabasebenzi ngasinye sinqunywa ukuthi bahlangabezana kanjani nalezo zinhloso? Ngabe isinxephezelo somsebenzi silingana nomthelela ohlangabezana nalezo zinhloso